Fahasoavana tsy re sy tsy fantatra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > toriteny > Tsy misy henatra, fahasoavana manala baraka
Raha miverina any amin’ny Testamenta Taloha isika, any amin’ny 1. Bokin'i Samoela, hitanao, eo amin'ny faran'ny boky, fa ny vahoakan'ny Isiraely (ny Isiraelita) dia niady indray tamin'ny Filistina fahavalony.
Amin'ity toe-javatra manokana ity dia voadaroka izy ireo. Raha ny marina, voa mafy kokoa noho ny kianjan'ny baolina kitra Oklahoma, Orange Bowl izy ireo. Ratsy izany; fa amin’io andro manokana io, amin’ity ady manokana ity, dia tsy maintsy ho faty i Saoly mpanjakany. Niara-maty taminy tamin’io ady io i Jonatana zanany. Manomboka toko vitsivitsy aty aoriana ny tantarantsika, in 2. Samuel 4,4 (Jen-2000):
“Teny an-dalana dia mbola nisy zafikelin'i Saoly, zanak'i Jonathan izay antsoina hoe Merib-Baal [antsoina koa hoe Mefiboschet], fa izy dia nalemy tamin'ny tongotra roa. Dimy taona izy raha maty ny rainy sy ny raibeny. Raha vao tonga avy any Jezirela ny vaovao dia nentin'ny mpitsabo mpanampy azy handositra niaraka taminy. Nefa vetivety dia nariany izy. Izy io dia nalemy hatrizay. ” Ity dia ny haino aman-jery Mefiboshet. Satria sarotra / fehezanteny io anarana io, omenay anarana ny maraina izy, antsoinay hoe "Schet" izy io ho fohy. Fa amin'ity tantara ity, ny fianakaviana voalohany dia toa efa nisy namono tanteraka. Rehefa tonga any an-drenivohitra ny vaovao ka tonga eo an-dapa dia tampoka ny korontana sy ny korontana - satria fantatrao fa matetika rehefa novonoina ny mpanjaka dia novonoina ireo mpianakavy koa mba hahazoana antoka fa tsy hisy korontana intsony. Ka tonga tamin'ny fotoana nitrangan'ny korontana ankapobeny dia naka an'i Shet ny rahavavin'ny zaza ary nandositra niala ny lapa. Fa eo amin'ny fihantonan-dàlana sy ny hadalany izay lehibe tao amin'io toerana io, dia nariany ilay izy. Araka ny lazain'ny Baiboly amintsika, dia mbola nalemy foana izy tamin'ny andro sisa iainany. Eritrereto fotsiny fa avy amin'ny firaisana mpanjaka izy, ary ny andro talohan'io, toy ny zazalahy dimy taona dia nihetsika tsy misy ahiahy izy. Nandeha manodidina ny lapa izy nefa tsy niahiahy. Saingy tamin'io andro io dia niova ny fiainany manontolo. Novonoina ny rainy. Novonoina ny dadabeny. Nidina izy ary nalemy nandritra ny androny. Raha manohy mamaky Baiboly ianao, dia tsy hahita be izay holazaina ao amin'ny Schet amin'ny 20 taona ho avy. Ny tena fantatsika momba azy dia hoe mipetraka ao amin'ny toerana iray mitoka-monina izy ary mitokana.
Azoko alaina an-tsaina fa efa manomboka manontany tena amin'ny tenanao ihany ny sasany aminareo izay matetika no anontaniako ny tenako rehefa maheno hafatra aho: "Eny, maninona?" Ka inona ary no ifandraisan'izany amiko? Androany aho te-hamaly ny valin'ny hoe "Dia inona?" Amin'ny lafiny efatra. Ity no valiny voalohany.
Tapaka noho izay heverintsika isika
Mety tsy ho nalemy ny tongotrao, fa ny sainao angamba. Mety tsy ho tapaka ny tongotrao, fa araka ny lazain'ny Baiboly, ny ainao. Ary izay no toe-javatra iainan'ny olona rehetra amin'ity efitrano ity. Io no zava-misy iainantsika. Rehefa miresaka momba ny toe-javatra rava i Paul dia mandeha dingana iray fanampiny.
Jereo ny Efesianina 2,1:
“Nandray anjara tamin'ity fiainana ity koa ianao. Maty ianao taloha; satria tsy nankatò an'Andriamanitra ianao ary nanota. Mihoatra noho ny fahatapahana azy fotsiny izy mba ho afa-paraly. Nilaza izy fa ny toetranao misaraka amin'i Kristy dia azo raisina ho 'maty ara-panahy'.
Avy eo izy dia miteny ao amin'ny Romana 5 andininy 6:
»Io fitiavana io dia aseho amin'ny fahitan'i Kristy ny ainy hamonjy antsika. Amin'ny fotoana mety, raha mbola tao anatin'ny herin'ny ota isika, dia maty ho antsika tsy mpankahala olona. ”
Azonao ve? Tsy afa-manoatra izahay ary, na tiana na tsia, na azonao atao ny manamarina izany na tsia, mino izany na tsia, milaza ny Baiboly fa ny toe-javatra misy anao (raha tsy mifandray amin'i Kristy ianao) dia an'ny maty ara-panahy. Ary ity ny sisa amin'ny vaovao ratsy: tsy misy azonao atao hamahana ny olana. Tsy manampy ny fiezahana mafy kokoa na hihatsara. Vaky kokoa noho ny eritreretintsika isika.
Ny drafitry ny mpanjaka
Io fihetsika io dia manomboka amin’ny mpanjaka vaovao eo amin’ny seza fiandrianan’i Jerosalema. Davida no anarany. Efa nandre momba azy angamba ianao. Mpiandry ondry niandry ondry izy. Mpanjakan’ny firenena izy izao. Izy no namana akaiky indrindra, naman'ny rain'i Schet. Jonatana no anaran'ny rain'i Schet. Tsy vitan’ny hoe nandray ny seza fiandrianana sy tonga mpanjaka anefa i Davida, fa nandresy ny fon’ny vahoaka koa. Raha ny marina, dia nanitatra ny fanjakana izy avy amin'ny 15.500 kilometatra toradroa ho 155.000 kilaometatra toradroa. Miaina ao anatin'ny fotoanan'ny fiadanana ianao. Mandeha tsara ny toe-karena ary midangana ny hetra. Raha demokrasia no nisy, dia azo antoka ny fandresena ho an'ny fe-potoana faharoa. Tsy nety ho tsara kokoa ny fiainana. Azoko sary an-tsaina hoe nifoha vao maraina i Davida tamin’ity maraina ity noho ny olona rehetra tao an-dapa. Mandeha miala voly mankany an-tokotany izy, mamela ny eritreriny hivezivezy eny amin'ny rivotra mangatsiaka maraina alohan'ny hidiran'ny fanerena amin'ny andro. Miverina ny eritreriny, manomboka mahatsiaro ireo horonam-peo tamin'ny lasa izy. Amin'io andro io anefa, ny horonam-peo dia tsy mijanona amin'ny hetsika iray, fa mijanona amin'ny olona iray. I Jonatana ilay sakaizany, izay tsy hitany hatry ny ela; efa maty an’ady izy. Tsaroan’i Davida izy, ilay namany akaiky. Tadidiny ny fotoana niarahany. Tsaroan’i David avy eo ny resaka nifanaovany taminy avy tany amin’ny lanitra manga. Tamin’izay fotoana izay, dia tototry ny hatsaram-panahin’Andriamanitra sy ny fahasoavany i Davida. Satria tsy ho nisy izany rehetra izany raha tsy nisy an’i Jonatana. Mpiandry ondry i Davida ary mpanjaka izy izao ary mipetraka ao an-dapa ary lasa niverina tany amin’i Jonatana namany taloha ny sainy. Tsaroany ny resaka nifanaovan’izy ireo rehefa nanao fifanarahana. Tao anatin’izany no nifanomezan-toky fa tokony hifampikarakara ny fianakavian’ny tsirairay avy, na aiza na aiza mety halehan’ny diany amin’ny hoavy. Tamin'izany andro izany dia nihodina Davida ka niverina ho any an-dapany ka nanao hoe:2. Samuel 9,1): “Mbola velona ve ny fianakavian’i Saoly? Mba te hanao soa amin’ilay olona voakasika ve aho, noho ny amin’i Jonatana namako efa nodimandry? Nahita mpanompo atao hoe Ziba izy ka namaly azy (and.3b): «Mbola misy zanak’i Jonatana. nalemy ny tongony roa. Ny zavatra hitako mahaliana dia ny hoe i Davida dia tsy manontany hoe "misy mendrika ve?" sa "misy mpanao politika afaka miasa ao amin'ny kabinetran'ny governemantako?" na "misy manana traikefa ara-miaramila afaka manampy ahy hitarika tafika?" Manontany fotsiny izy hoe: "Misy olona ve?" Ny hatsaram-panahy no fanontaniana, ary namaly i Ziba hoe: “Misy olona malemy.” Saika nilaza toy izao ny valin-tenin’i Ziba: “Fantatrao, ry Davida, tsy azoko antoka fa tena tianao izy hiaraka aminy . Tena tsy mitovy amintsika izy. Tsy mety amintsika izy. Tsy azoko antoka fa manana toetra maha-mpanjaka izy. " Tsy azo ihodivirana anefa i Davida ka niteny hoe: “Lazao amiko izay misy azy”. Sambany ny Baiboly no miresaka momba an’i Shet nefa tsy miresaka ny kilemany.
Nieritreritra momba izany aho, ary fantatrao, heveriko fa ao anaty andiany iray dia maro amintsika eto no mitondra stigma manodidina antsika. Misy zavatra iray tamin'ny lasa teo izay mifikitra amintsika toy ny kitapo amin'ny baolina. Ary misy olona misisika foana antsika momba izany; tsy navelany ho faty mihitsy izy ireo. Ary maheno resaka tahaka ny hoe "Efa nisy naheno ny momba an'i Susan intsony? I Susan, hainao fa io no nandao ny vadiny." Na: "Niresaka tamin'i Jo aho tamin'ny andro hafa. Fantatrao hoe iza no tiako holazaina, eny, ny alkaola." Ary misy olona sasany manontany tena hoe: "Misy ve mahita ahy tsy misaraka amin'ny lasa sy ny tsy fahombiazako taloha?»
Ary hoy Ziba: Fantatro izay misy azy, fa any Lodebara no monina ao. Ny fomba tsara indrindra hamaritana an'i Lo Debar dia ny hoe "Barstow" (toerana lavitra any Southern California) any Palestina fahiny. [Hehy]. Raha ny marina, io anarana io dia midika ara-bakiteny hoe "toerana ngazana". Mipetraka any izy. Nahita an'i Schet i David. Alao sary an-tsaina fotsiny hoe: mihazakazaka manenjika ilay kilemaina ny mpanjaka. Ity ny valiny faharoa amin'ny "Dia ahoana?"
Manaraka anao mafy kokoa noho ny eritreritrao
Tsy mampino izany. Tiako ianao hiato vetivety aloha ary mieritreritra momba azy. Ilay lavorary, masina, marina, mahery, mahery, Andriamanitra tsy manam-petra, Ilay Mpamorona izao rehetra izao manontolo, no manenjika ahy ka lasa manaraka anao. Miresaka momba ny olona mitady, olona mandroso ara-panahy izahay hahitana zava-misy ara-panahy.
Fa raha mankany amin'ny Baiboly isika dia hitantsika fa raha ny tena izy dia Andriamanitra no mitady azy [hitantsika izany ao amin'ny Soratra Masina rehetra]. Miverena any am-piandohan'ny Baiboly ny tantaran'i Adama sy Eva dia nanomboka ny toerana nanafenany an'Andriamanitra. Voalaza fa avy amin'ny hatsiaka Andriamanitra ary mitady an'i Adama sy Eva. Hoy izy: "Aiza ianao?» Rehefa avy nanao fahadisoana mahamenatra ny namonoana Egyptiana iray i Mosesy, dia tsy maintsy natahotra ny ainy nandritra ny 40 taona izy ary nandositra nankany an-tany efitra, izay nitsidihan'Andriamanitra azy ny endrika mirehitra mirehitra ary nanomboka nihaona taminy.
Rehefa nantsoina hitory amin'ny anaran'ny Tompo Jona tao an-tanànan'i Ninive Jona dia nihazakazaka tamin'ny lalana mifanohitra i Jona ary nanenjika azy Andriamanitra. Raha mankany amin'ny Testamenta Vaovao isika, mahita an'i Jesosy mihaona amin'ny lehilahy roa ambin'ny folo lahy ve isika, miteha-damosina izy ireo ary miteny hoe: "Te-hiaraka amiko ve ianao"? Rehefa nieritreritra an'i Peter aho rehefa avy nandà an'i Kristy intelo ary nandao ny asany tamin'ny naha-mpianatra azy ary niverina nanarato - tonga Jesosy ary nitady azy teny amoron-dranomasina. Na eo aza ny tsy fahombiazany dia manenjika azy Andriamanitra. Manaraka anao, manaraka anao ...
Andeha hojerentsika ny andininy manaraka (Efes 1,4-5): “Na dia talohan’ny namoronany izao tontolo izao aza, dia efa hitany ho olon’i Kristy isika; tao aminy no nifidianany antsika hijoro eo anatrehany masina sy tsy misy kilema. Noho ny fitiavana no nanaovany antsika teo imasony ...: ara-bakiteny no nifidianany antsika tao aminy (Kristy). Izy no nanapa-kevitra ny ho zanany lahy sy vavy - amin’ny alalan’i Jesosy Kristy sy ho an’ny tenany. Izany no sitrapony ary izany no tiany. " Manantena aho fa takatrao fa ny fifandraisantsika amin’i Jesosy Kristy, ny famonjena, dia nomen’Andriamanitra antsika. Andriamanitra no mifehy azy. Andriamanitra no nisantatra izany. Andriamanitra no namorona azy. Manenjika antsika izy.
Miverina amin'ny tantarantsika. Nandefa andian'olona vitsivitsy i David hitady an'i Shet ary nahita azy tany Lo Debar izy ireo. Ao i Schet dia miaina ao amin'ny mitokana sy tsy mitonona anarana. Tsy te ho hita izy. Raha ny marina dia tsy te-ho hita izy raha te hiaina amin'ny andro sisa iainany. Nefa izy kosa no hita, ary nalain’ireto lehilahy ireto i Shet ka nitondra azy ho any anaty fiara, dia napetrany tao anaty fiara sy nentiny niverina tany an-drenivohitra, tao an-dapa. Tsy dia miresaka firy momba an'io soavaly io ny Baiboly. Saingy azoko antoka fa azontsika atao ny mamina sary an-tsaina ny mety hitranga amin'ny fipetrahana eo amin'ny gorodon'ny fiara. Inona no fihetseham-po mety ho tsapan'i Schet tamin'ity dia ity, tahotra, tahotra, tsy fahatokisana. Ny fahatsapana hoatr'izany dia mety ho andro farany amin'ny fiainany teto an-tany. Avy eo izy dia manomboka manao drafitra. Ny drafiny dia izao: raha hiseho eo anatrehan'ny mpanjaka aho ary mijery ahy, dia fantany fa tsy loza mitatao aminy aho. Hiankohoka eo anatrehany aho ary mangataka ny famindram-pony, ary angamba hamelako ahy izy. Ka dia nifindra teo alohan'ny lapa ny fiara. Nentin'ny miaramila tao anatiny ary napetrany tao afovoan'ny efitra. Ary somary miady amin'ny tongony izy ary miditra i Davida.
Mariho izay mitranga ao 2. Samuel 9,6-8: “Rehefa tonga i Meribala, zanak’i Jonatana, ary zafikelin’i Saoly, dia niankohoka tamin’ny tany teo anatrehan’i Davida izy ka nanome azy ny voninahitra mendrika azy. Ary hoy i Davida taminy: “Eny, ry mpanomponao mankatò!” Hoy i Davida: “Aza matahotra, ry Habakoka, fa hanao soa aminao aho noho ny amin’i Jonatana rainao. . Homeko anao ny tany rehetra izay an’i Saoly raibenao fahiny. Ary afaka mihinana eo amin'ny latabatro mandrakariva ianareo. "" Ary raha nijery an'i Davida izy, dia nametraka izao fanontaniana manaraka izao tamin'ny vahoaka voatery. “Niankohoka indray i Meribala ka nanao hoe: “Tsy mendrika ny famindram-ponao amiko aho. Tsy alika maty aho! ""
Fanontaniana izany! Ity tsy fanehoana famindram-po tsy ampoizina ity ... Mahatakatra izy fa ketraka. Tsy misy olona Izy. Tsy manana zavatra haterany amin'i Davida izy. Nefa izay no fahasoavana. Ny toetra, ny toetran'Andriamanitra dia ny fironana sy ny fironana hanao zavatra tsara sy tsara ho an'ny olona tsy mendrika. Izany, ry namako, dia fahasoavana. Fa aoka zao jerena. Tsy ity izao tontolo izao iainan'ny ankamaroantsika. Miaina ao anatin'ny tontolo iray izay milaza isika hoe: "Tiako ny safidiko." Te hanome izay olona mendrika azy izahay. Indray mandeha aho tsy maintsy niasa ho mpikambana ao amin'ny mpitsara, ary hoy ny mpitsara taminay: "Amin'ny maha mpitsara anao, anjaranao ny mitady ny zava-misy ary mampihatra ny lalàna amin'izy ireo. Tsy misy zavatra kely kokoa. Tsarovy ny zava-misy ary ampiharo ny lalàna amin'izy ireo." Ny mpitsara dia tsy liana amin'ny famindram-po fa tsy ny famindram-po, fa ny fahamarinana no mila fahamarinana, ary ny fitsarana dia ilaina amin'ny fitsarana mba tsy hiadiana amin'ny zavatra, fa rehefa mankany amin'Andriamanitra dia tsy fantatro momba anao - nefa tsy mila fahamarinana aho. Fantatro izay mendrika aho, fantatro fa misy aho, maniry famindram-po ary maniry famindram-po aho .. Naneho famindram-po i Davida tamin'ny famonjeny ny fiainan'i Schet, ary ny ankamaroan'ny mpanjaka dia nanatanteraka mpandova ho lasa seza fiandrianana. Tamin'ny fanavotany ny fiainany dia naneho famindram-po i Davida, fa i David dia lavitra lavitra noho ny fanehoana famindram-po taminy tamin'ny filazana hoe: "Izaho nitondra anao eto satria te hamindra fo aminao." Inty ny valiny fahatelo. amin'ny "Ka inona?"
Tiantsika mihoatra noho izay noheverintsika fa tiantsika isika
Eny, tapaka isika ary arahina antsika. Ary izany dia satria tia antsika Andriamanitra.
Romana 5,1-2: “Ary satria neken’Andriamanitra noho ny finoana isika, dia mihavana amin’Andriamanitra. An'i Jesosy Kristy Tompontsika izany. Izy no nanokatra ny lalan’ny fahatokiana ho antsika ary miaraka amin’izany koa ny fidirana amin’ny fahasoavan’Andriamanitra, izay efa nahazoantsika fototra mafy orina ankehitriny.
Ary ao amin’ny Efesianina 1,6-7: »... mba ho re ny fiderana ny voninahiny, dia ny fiderana ny fahasoavana nasehony antsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany malala. Ny rany no nanavotra antsika;
Voavela ny helokay rehetra. [Azafady mba vakio miaraka amiko izao manaraka izao] Ka dia nasehon'Andriamanitra ny haren'ny fahasoavany. ” Akory tsara sy manan-karena tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra.
Tsy fantatro izay ao am-ponao. Tsy haiko izay karazana fanilikilihana anananao. Tsy fantatro izay etikety misy anao. Tsy fantatro hoe taiza no tsy nahomby taminao taloha. Tsy fantatro izay habibiana afeninao ao anatiny. Saingy azoko lazaina aminao fa tsy mila manao an'ireo intsony ianao. Tamin'ny 18 Desambra 1865, ny 1st3. Fanitsiana ny lalàm-panorenan'i Etazonia nosoniavina. Amin'ity 1 ity3. Fiovana, nofoanana mandrakizay ny fanandevozana tany Etazonia. Andro manan-danja ho an'ny firenentsika izany. Koa tamin’ny 19 Desambra 1865, raha ara-teknika, dia tsy nisy andevo intsony. Saingy maro no mbola nijanona tao amin'ny fanandevozana - ny sasany nandritra ny taona maro noho ny antony roa:
Nisy ny mbola tsy nahare momba azy io.
Ny sasany tsy nety nino fa afaka izy.
Ary miahiahy aho, miteny ara-panahy, fa misy marobe amintsika ato amin'ity efitrano ity ankehitriny izay mitovy amin'ny toe-javatra.
Efa voadidy ny vidiny. Efa voaomana ny lalana. Momba izany: na ianao tsy mbola naheno ny teny na nolavinao fotsiny ny tsy hino azy fa marina.
Fa marina izany. Satria tiana ianao ary nanaraka anao Andriamanitra.
Fotoana vitsy lasa izay dia nomeko vazivazy i Laila. Tsy mendrika izany i Laila. Tsy niasa ho an'izany izy. Tsy mendrika azy izy. Tsy nameno taratasy fisoratana anarana ho azy io. Tonga izy ary gaga fotsiny tamin'ity fanomezana tsy nampoizina ity. Fanomezana iray karama hafa. Saingy izao ilay hany asany - ary tsy misy zava-miafina miafina - dia ny manaiky azy ary manomboka mankafy ny fanomezana.
Mitovy amin'izany ihany, fa efa nandoa ny vidiny aminao Andriamanitra. Ny hany azonao atao dia ny mandray ny fanomezana atolotra anao. Amin'ny maha mpino antsika dia nisy fihaonan'ny famindrampo. Niova ny fiainantsika tamin'ny alalan'i Kristy ary lasa tia an'i Jesosy isika. Tsy mendrika an'izany izahay. Tsy mendrika izany izahay. Saingy Kristy dia nanolotra izany fanomezana tsara indrindra amin'ny fiainantsika izany. Izany no antony tsy itovizantsika ankehitriny.
Rava ny fiainanay nanao fahadisoana izahay. Nanaraka antsika anefa ny mpanjaka satria tia antsika. Tsy tezitra amintsika ny mpanjaka. Mety hifarana eto ihany ny tantaran'i Shet, ary ho tantara mahafinaritra izany. Saingy misy ampahany iray hafa - tsy tiako ho diso ianao, dia ilay iray 4. Scene.
Ny ampahany farany amin'ny 2. Samuel 9,7 Hoy izy: “Homeko anao ny tany rehetra izay an’i Saoly raibenao fahiny. Ary afaka mihinana eo amin'ny latabatro foana ianao." Roapolo taona talohan’izay, tamin’izy dimy taona, dia nisy loza nahatsiravina ihany. Tsy vitan’ny hoe namoy ny fianakaviany manontolo izy, fa nalemy sy naratra, ary niaina tany an-tsesitany ho mpitsoa-ponenana nandritra ny 15 ka hatramin’ny 20 taona farany. Ary izao dia nandre ny mpanjaka niteny izy hoe: "Tiako ho avy eto ianao." Ary andininy efatra fanampiny dia hoy i Davida taminy: “Tiako hiara-mihinana amiko eo amin’ny latabatro tahaka ny anankiray amin’ny zanako ianao”. Tiako ity andininy ity. Anisan'ny fianakaviana i Schet ankehitriny. Tsy niteny i Davida hoe: “Fantatrao, ry Set, fa tiako homena anao ny fidirana ao an-dapa ary avelao hitsidika anao tsindraindray”. Na koa hoe: "Raha fetim-pirenena isika dia avelako hipetraka ao amin'ny vata misy mpanjaka miaraka amin'ny fianakavian'ny mpanjaka ianao". Tsia, fantatrao izay nolazainy? "Schet, hamandrika toerana ho anao eo amin'ny solaitrabe izahay isaky ny hariva fa anisan'ny fianakaviako ianao izao". Hoy ny andininy farany amin’ilay tantara: “Nonina tany Jerosalema izy, satria nihinana tsy tapaka teo amin’ny latabatry ny mpanjaka. nalemy ny tongony roa. (2. Samuel 9,13). Tiako ny fomba fiafaran'ny tantara satria toa nametrahan'ny mpanoratra lahatsoratra kely teo amin'ny faran'ny tantara. Miresaka momba ny fomba niainan’i Shet izany fahasoavana izany ary tokony hiara-mipetraka amin’ny mpanjaka izy izao, ary mahazo mihinana eo amin’ny latabatry ny mpanjaka izy. Tsy tiany anefa ny hanadinoantsika izay tsy maintsy reseny. Ary toy izany koa ny antsika. Ny vola lany taminay dia nilana zavatra maika izahay ary nihaona tamin'ny fahasoavana. Taona maro lasa izay, Chuck Swindol dia nanoratra momba ity tantara ity. Te-hamaky fehintsoratra fotsiny aho. Hoy izy: “Eritrereto izao fisehoan-javatra manaraka izao, taona maromaro tatỳ aoriana: Naneno ny lakolosy tao an-dapan’ny mpanjaka, ary tonga teo amin’ny latabatra lehibe Davida ka nipetraka. Fotoana fohy taorian’izay, dia nipetraka teo ankavian’i Davida i Amnona, ilay fetsy sady fetsy, i Tamara. , tovovavy tsara tarehy sy sariaka, niseho ka nipetraka teo anilan’i Amnona.Tamin’ny ilany iray kosa, i Solomona dia tonga moramora avy tao amin’ny fianarany — Solomona lehilahy be taona, mamiratra, very hevitra. Tamin'izany hariva izany, dia nasaina hisakafo i Joaba, ilay mpiady mahery sy komandin'ny miaramila, ary ny seza iray mbola banga, ka samy niandry ny rehetra. ny tehina. Schet io, izay mandeha tsimoramora mankeo amin'ny latabatra. Miondrika eo amin'ny sezany izy, ny lamban-databatra manarona ny tongony. Heverinao ve fa azon'i Shet ny atao hoe fahasoavana? Fantatrao fa izany dia mamaritra ny fisehoan-javatra ho avy rehefa hivory manodidina ny latabatra fanasana lehibe any an-danitra ny fianakavian’Andriamanitra manontolo. Ary amin’izany andro izany ny lamban-databatra misy ny fahasoavan’Andriamanitra dia manarona ny filantsika, manarona ny fanahintsika miboridana. Hitanareo, ny fomba idirantsika ao amin’ny fianakaviana dia amin’ny alalan’ny fahasoavana, ary manohy izany ao amin’ny fianakaviana amin’ny alalan’ny fahasoavana isika. Fanomezan’ny fahasoavany ny andro tsirairay.
Ny andininy manaraka dia ao amin’ny Kolosiana 2,6 “Ianareo dia nandray an’i Jesosy Kristy ho Tompo; koa ankehitriny miaraha miombona aminy sy araka ny karazany avy! Nandray an’i Kristy tamin’ny fahasoavana izy ireo. Ankehitriny rehefa ao anatin’ny fianakaviana ianao dia ao anatin’izany noho ny fahasoavana. Misy amintsika mihevitra fa rehefa tonga Kristianina amin’ny alalan’ny fahasoavana isika, dia tsy maintsy miasa mafy kokoa sy manao izay marina an’Andriamanitra mba hahazoana antoka fa mbola ho tia sy tia antsika Izy. Eny, tsy misy na inona na inona mihoatra ny fahamarinana. Amin'ny maha-ray ahy, ny fitiavako ny zanako dia tsy miankina amin'ny karazana asa na ny fahombiazan'izy ireo, na ny hoe manao ny zava-drehetra tsara izy ireo. Ny fitiavako rehetra dia azy ireo fotsiny satria zanako izy ireo. Ary toy izany koa ho anao. Manohy miaina ny fitiavan’Andriamanitra ianao satria fotsiny hoe iray amin’ireo zanany. Avelao aho hilaza ny farany hoe "Dia ahoana?" mamaly.
Tombontsoa kokoa isika noho izay heverintsika
Tsy namonjy ny aintsika Andriamanitra fa efa nandatsaka antsika tamin'ny fiainany fahasoavana. Henoy ireto teny ireto ao amin'ny Romana 8, hoy i Paul:
“Inona no mbola holazaina momba izany rehetra izany? Andriamanitra momba antsika [ary Izy no], ka iza no te-hitsangana hanohitra antsika? Tsy niaro ny zanany lahy izy, fa nanolotra azy ho faty ho antsika rehetra. Fa raha nomeny antsika ny Zanaka, moa hafoiny va isika? (Romana 8,31- iray).
Tsy ny nanomezany an'i Kristy ihany no ahafahantsika miditra ao amin'ny fianakaviany, fa izao kosa no omeny anao izay rehetra ilainao mba hiainan'ny fahasoavana raha vao eo amin'ny ankohonana ianao.
Fa tiako ity fehezanteny ity: "Andriamanitra dia momba antsika". Avereno aho: "Andriamanitra ho anareo.» Ary koa, tsy misy isalasalana fa ny sasany amintsika izay mbola eto ankehitriny dia tsy tena mino izany, tsy mbola nino anay mihitsy hoe hisy olona ho any amin'ny faran'ny mpankafy eny amin'ny kianja.
Nilalao basikety aho tany amin’ny lisea. Matetika izahay no tsy manana mpihaino rehefa milalao. Indray andro anefa, feno ny gym. Nahafantatra aho tatỳ aoriana fa nanomana fanangonam-bola izy ireo tamin’io andro io izay ahafahanao mividy ampahefatry ny dolara hivoaka ny kilasy. Talohan'izay anefa dia tsy maintsy tonga tany amin'ny lalao baseball ianao. Amin'ny faran'ny 3. Nisy tabataba mafy tamin'ny fehezanteny faharoa, navoaka ny sekoly, ary nanjavona haingana toy ny teo aloha ny gym. Saingy teo, teo afovoan'ny dabilion'ny mpanatrika, dia nisy olona roa nijanona mandra-pahatapitry ny lalao. Ny reniko sy ny renibeko io. Hainao ve fa? Nanatona ahy izy ireo ary tsy fantatro akory hoe teo izy ireo.
Indraindray dia mila anao elaela aorian'ny nahalalan'ny olon-kafa azy rehetra - mandra-tsapanao fa eo anilanao Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Eny, tena, ary mijery anao izy.
Tsara loatra ny tantaran'i Schet, saingy tiako ny mamaly fanontaniana hafa alohan'ny handehananay dia: koa, ary?
Andeha isika hanomboka amin'ny 1. Korintiana 15,10: « Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha-iray ahy, ary tsy foana ny famindram-pony. Ity andalana ity dia toa milaza hoe: "Rehefa nihaona tamin'ny fahasoavana ianao, dia misy fiovana ny fiovana." Fony aho mbola kely ary nihalehibe dia nahavita tsara aho tany an-tsekoly ary nahomby tamin'ny ankamaroan'ny zavatra notsapaiko, avy eo dia nandeha tany amin'ny oniversite sy seminera ary nahazo ny asa pastora voalohany teo amin'ny faha-22 taonako. Tsy nahafantatra na inona na inona aho, fa noheveriko fa haiko ny zava-drehetra. Tao amin'ny seminera aho ary nivezivezy nankany amin'ny tanàna ambanivohitra iray any afovoan-tany andrefan'i Arkansas isaky ny faran'ny herinandro. Mety ho tsy dia nanafintohina ny kolontsaina ny nandeha tany ivelany raha oharina tamin'ny taorian'io Arkansas afovoany andrefana io.
Hafa ny tontolo hafa ary ny olona ao ihany no tsara tarehy. Tianay izy ireo ary tianay izy ireo. Fa nandeha tany aho niaraka tamin'ny tanjona hanangana fiangonana ary ho pasitera mahomby. Te hampihatra izay rehetra nianarako tao amin'ny seminera aho. Saingy, tamim-pahatsorana, rehefa avy tany nandritra ny 2½ taona teo aho dia vita. Tsy fantatro izay hataoko intsony.
Zara fa nitombo ny fiangonana. Tadidiko nanontany an'Andriamanitra aho: Alefaso aho any an-toeran-kafa. Tiako fotsiny ny miala lavitra eto. Ary tadidiko fa nipetraka tao an-tokotaniko irery aho tao amin'ny biraoko ary tsy nisy olon-kafa tao amin'ny fiangonana iray. Izaho irery dia mpiasa daholo ary nanomboka nitomany aho ary tena nanahy ary nahatsapa ho tsy fahombiazana ary nahatsapa fanadinoana sy nivavaka niaraka tamin'ny fahatsapana fa tsy misy olona nihaino akory.
Na dia efa 20 taona mahery izay dia mbola tadidiko mazava tsara izany. Na dia traikefa mampahory aza izany, dia tena nahasoa izany satria nampiasa izany tamin'ny fiainako Andriamanitra mba hanapotehana ny fahatokisako sy ny avonavoko ary nanampy ahy hahatakatra fa izay rehetra tiany hatao amin'ny fiainako , izany rehetra izany dia noho ny fahasoavany - ary tsy noho ny maha-tsara ahy na noho ny nanolorana ahy, na noho izaho mahay. Ary rehefa mieritreritra ny diako tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa aho ary mahita fa afaka nahazo asa tahaka izao [ary izaho no mahafeno ny fahaizako ho an'ny ataoko eto], dia matetika mahatsiaro tsy ampy. Fantatro zavatra iray fa na aiza na aiza misy ahy, na inona na inona tian'Andriamanitra hatao amin'ny fiainako, ato amiko na amin'ny alalako, ny zavatra rehetra dia avy amin'ny fahasoavany.
Ary rehefa azonao ny hoe, rehefa milentika io dia tsy afaka ny hitovizany ianao.
Ny fanontaniana natomboko nanontany ny tenako dia hoe: "Moa ve isika mahalala ny Tompo miaina fiainana maneho taratry ny fahasoavana?" Inona ny toetra sasany mampiseho fa "miaina fiainana fahasoavana aho?"
Andao hamarana izany isika manaraka ity andininy manaraka. Hoy i Paul:
“Fa inona no zava-dehibe amin'ny fiainako? Zava-dehibe ihany ny hahatanterahako ilay iraka nankinin’i Jesosy Tompo tamiko hatramin’ny farany [izay?]: Ny hitory ny vaovao tsara [ny hafatry ny fahasoavany] fa namindra fo tamin’ny olona Andriamanitra.” ( Asa. 20,24). Hoy i Paul: ity no iraka ataoko amin'ny fiainana.
Tahaka an'i Schet ihany ianao, izaho sy ianao dia torotoro ara-panahy, maty ara-panahy.Tena toa an'i Schet anefa izahay, dia narahina satria tia antsika ny mpanjakan'izao rehetra izao ary maniry antsika ao amin'ny fianakaviany. Tiany hisy fihetsiketsehana famindram-po amintsika. Mety ho izay no antony nahatonga anao teto androany maraina ary mbola tsy fantatrao akory ny antony nahatongavanao teto androany. Fa ao anaty dia tsikaritrareo fa mivolondraka na mikitika ao am-ponao. Io ilay Fanahy Masina miteny aminao hoe: "tiako ianao amin'ny fianakaviako." Ary, raha mbola tsy nandray ny dingana ianao hanombohana fifandraisana manokana amin'i Kristy, dia maniry ny hanolotra anao an'io fotoana io izahay androany maraina. Lazao izao manaraka izao: "Inty aho. Tsy manan-javatra atolotra aho fa tsy tonga lafatra. Raha tena nahafantatra ny fiainako hatreto ianao dia tsy ho tia ahy". Fa hamaly anao Andriamanitra: "Fa tiako ianao. Ary izay rehetra ataonao dia ny fanekena ny fanomezako". Ka te-hangataka aminao hiondrika vetivety aho ary raha mbola tsy nanao io dingana io ianao dia mangataka aminao aho mba hiara-mivavaka amiko. Lazaiko ny fehezanteny iray, mila mamerimberina izany ianao fa ataovy amin'ny Tompo.
"Ry Jesosy malala, toa an'i Schet, fantatro fa tapaka aho ary fantatro fa mila anao aho ary tsy azoko tanteraka izany fa mino aho fa tia ahy ianao ary nanaraka ahy ary ianao, ry Jesosy, maty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny vidin'ny otako dia efa nandoa vola. Ary izany no antony angatahako anao izao ho tonga amin'ny fiainako. Te hahalala sy hiaina ny fahasoavanao aho mba hananako fiainana mitondra fahasoavana ary hiaraka aminao mandrakariva.